Ragga Bidaarta Leh oo Looga Digay Inay Wadne Xannuun Yeelan Karaan Markay Gaadhaan 40 Sanno
Koox khubarro ah oo ka tirsan dhakhaatiirta Yurub ayaa daraasad ay sameeyeen natiijadii kasoo baxday waxay ku sheegeen in ragga leh bidaartu ay khatar ugu jiraan inay yeeshaan wadne xanuun markay gaadhaan da’da 40-tanka Sanno .
Khubaradan oo u waramaayey wargeyska Daily Mail oo uu qormadan kasoo xigtay wargeyska Dawan ayaa sheegay in ay tijaabo ku sameeyeen ilaa 790 oo qof, kuwaas oo ay ka heleen wadne xanuun, waxaanay intaas ku dareen in dadkaasi ay ahaayeen dad intooda badani leh bidaar .
Ilaa 1,270 qof oo kale ayay khubaraddani sheegeen in ay ku sameeyeen tijaabo , kuwaas oo aan lahayn wax bidaar ah, waxaanay khubaraddani sheegeen in dadkani ay noqdeen kuwo aan wax xanuun ah laga helin, caafimaadkooduna aad u wanaagsanaa.
Sidoo kale dhakhaatiirta wadnaha oo dhowaan ku yeeshay shir dalkaasi Hindiya ayaa iyaguna sheegay in baadhitaano dhinaca dhiiga ah oo ay ku sameeyeen dad leh bidaar ay ku ogaadeen in bidaartu ay xidhiidh la lee dahay wadne xanuunka.
Sababta ayay ku sheegeen in ay tahay falaadhaha cad ceeda oo si toos ah ugu dhaca xididada madaxa mara oo intooda badani soo mara ama taga wadnaha, iyada oo sidoo kalena ku xidhan dadkaasi iyo siday u qaataan koofiyaddaha madaxa la saaro.
Dhakhaatiirtan ayaa sheegay in 27% dadka leh wadne xanuunku yihiin kuwo lahaa calaamadaha bidaarta, kuwaas oo markay da’doodu gaadho 40 sanno uu kusoo baxo xanuunkaasi, halka 30% kamid ah dadkaasi leh wadne xanuunkuna ay saamayso timahooda iyo midabka timaha.
Dhakhaatiirtan ayaa usoo jeediyey dadka leh bidaarta iyo kuwa ay madaxooda soo gelaysoba inay baadhitaano ku sameeyaan caafimaadkooda, gaar ahaana caafimaadka wadnahooda, iyaga oo la soconaaya mar walba.